ရယ်စရာများ – Thutastar
မမ နဲ့ ခေး ဘာကို ရွေးမလဲ …
TV channel တခုက Interview ​လေး တ​ခု ကြည့်လိုက် မိ​တယ် ​။ ​မေးခွန်း​လေး က​တော့ ” မမနဲ့ ​ခေး ဆိုရင်​ ဘယ်​သူ့ကို ချစ်​မလဲ ” ဆိုတဲ့ ​မေးခွန်း​လေး ဖြစ်​ပါတယ် ​။ ​ယောကျာ်း​လေး 90% က​တော့ မမကို ချစ်​ပါတယ် ​တဲ့ ။ ​ဖြေနေလိုက် ​ကြတာများ တပုံတခဲ ပဲ ။ အဲ့ဒါဆိုရင် မမ ​တွေကို ဘာ​ကြောင့် ချစ်​တာလဲ ​မေး​တော့ ​ယောကျာ်းတိုင်း ​ပြောတဲ့ စကားက ” ကြီးရင်​ မှီ ငယ်​ရင်​ချီ ” တဲ့ ။ အဲ့ဒါကိုဗျာ ​တောင်​ကြီးက ​ကောင်မ​လေး တယောက်​က ”
လူမြင်မကောင်းအောင် ဟားတိုက်ရီတတ်ရင် မကြည့်နဲ့နော်.. အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မျော်လင့်ခြင်းလေး
လူမြင်မကောင်းအောင် ဟားတိုက်ရီတတ်ရင် မကြည့်နဲ့နော်.. အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မျော်လင့်ခြင်းလေး အ​ကြောင်းသိများဟားတိုက်​မရီရ မျှော်လင့်ခြင်းလေး သူမဟာ ၀ရန်တာရဲ့ ခန်းဆီးစကို အသာလှစ်ပြီး လမ်းမထက်ကို အသာချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်တယ်..။ “သူရောက်နေပြီ” လို့ တီးတိုးရေရွတ်ပြီး သူမ ထခုန်မတတ် ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ကယ်လို့သာ သူမခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပေါင်(၁၀၀) ကျော်ကျော် ဆလင်းဘော်ဒီလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူမဟာ Havana Dance ဖြစ်ဖြစ် Gangnam style ဖြစ်ဖြစ် ကမိမှာသေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုလို ဘော်ဒီနဲ့သာ ကရမယ်ဆို ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ ငလျှင်လှုပ်တယ်မှတ်ပြီး ထွက်ပြေးကြမှာသေချာတယ်။ “မိန်းကလေးက စသလိုများဖြစ်နေမလား” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့လည်း သူမချီတုန်ချတုန်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ “တစ်ကယ်တော့ ဒီကောင်လေးကိုက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမရှိတဲ့ ငနုံလေး” လို့ သူမ တစ်ကိုယ်တည်းပြောပြန်တယ်။ တကယ်ဆို တစ်နှစ်ကျော်ကျော်အချိန်ထိ သူမအိမ်ရှေ့မှာ
ကိ​တ်​ ​စေခြင်း အနုပညာ …..
သမီးကို ဒီထက်​ ကြီးတာ​ ပေး ” “​ကျစ်​ နင့်​ဟာက မိုးပျံ ပူ​ဖောင်းကြီး ဖြစ်​​တော့မယ်​ ” “ကြီး​လေ ​ကောင်း​လေ မဟုတ်​ဘူးလား အစ်​ကိုရဲ့ ” “ဟွမ့်​ … ” ကျုပ်​မှာစီးပွား​ရေးမ​ကောင်းလို့ ​ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်​တာ​လေး ​ကောက်လုပ်​ချလိုက်​တာ ၊ အဆင်​​တော့ ​ပြေသား​ဗျ … ​ရောင်းရတာ လက်​ကို မလည်​ဘူး။တခြား​တော့မဟုတ်​ဘူး။ကျုပ်​လုပ်​ငန်းက ဖင်​တု ​ရောင်းတာ ။ “အစ်​ကို သမီး ဒါနဲ့ အဆင်​​ပြေ မလား ” ငတိမက တပ်​ထားတဲ့ ဖင်​တုကို ထပ်​​ကော့ ပြ​သေးတယ်​ … “အွင့်​ … ​တော်​​လောက်​ပြီ ထင်​တယ်​ ” “အစ်​ကိုကလည်း ကိတ်​မှ မကိတ် ​​သေးတာ ”
အဖေခေါ်ခ …တစ်​ရက်​ ၆၀၀ ကျပ် !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ..ကိုထွန်းနဲ့မကြည်ပြာ ဆိုတဲ့လင်မယား သားသမီးသုံးယောက် မွေးဖွားထားတယ်ပေါ့ ! ကိုထွန်းဟာ အရက်ကျွန်ဖြစ်သွားပြီ ! အရက်ကလွဲလို့ ..သူ့ဘဝမှာ ဘာမှမရှိ ! မကြည်ပြာကိုလည်း သူဂရုမစိုက်တော့ ! သားသမီးသုံးယောက်ကိုလည်း..စိတ်မဝင်စားတော့ ! သူသိတာက.. မကြည်ပြာဆီကရမဲ့ ..အရက်ဖိုး မနက် ၂၀၀၊ နေ့လည် ၂၀၀ နဲ့ ညနေ ၂၀၀၊ ဒါပဲ….သူ သိတော့တယ် ! မကြည်ပြာကတော့..ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုး ဈေးသည်ဘဝနဲ့ မိသားစုကိုဦးဆောင်ပြီး ကလေးတွေ စားစရိတ် ကျောင်းစားရိတ်အပြင်..ကိုထွန်းအတွက်​အရက်ဖိုးကိုပါ နေ့စဉ် ပင်ပန်းကြီးစွာရှာဖွေနေရတယ် ! ဒါကို..မကြည်ပြာရဲ့ အစ်မတွေအဒေါ် တွေက မကျေနပ်ကြတော့ဘူး ! ဒါနဲ့..မကြည်ပြာကို ခေါ်ဆူကြတယ် ! ညည်း ဒီလောက်
မိန်းကလေးတိုင်း အလိုချင်ဆုံး အရာ
တခါတုန်းက နိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်တစ်ပါး နန်းတက်ခဲ့တယ်။ ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့ အနီးအနားမှာ အလွန် အင်အားကြီးပြီး စစ်လိုလားတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး ရှိတယ်… ထိုဘုရင်ကြီးဟာ တိုင်းပြည်ငယ်လေး ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ပေမဲ့ ဘုရင်ငယ်လေးရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို သဘောကျလို့ အခွင့်အရေး တစ်ခု ပေးလိုက်ပါတယ် ….. အဲ့ဒီအခွင့် အရေးကတော့ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ.. ဘုရင်ငယ်လေး အတွက် အချိန်တစ်နှစ် ပေးထားပြီး မဖြေနိုင်ပါက အသတ်ခံရမယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်…. မေးခွန်းက လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံး အရာကဘာလဲ ????? ပါတဲ့ .. အဲဒီ မေးခွန်းကတော့ ဘုရင်လေးနဲ့ ပညာရှိ အမတ်တွေကို ခက်ခဲရှုတ်ထွေးစေ တော့တာ ပါဘဲ…. တချိုက
ကမ္ဘာ့ဖလားကာလ ဇနီးသည်ထံသို့ အထူးသတိပေး ကြေငြာချက် (၁) ရီမုတ်ကွန်ထရိုးအား တစ်လတိတိ မိမိအပိုင်ဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။ (၂) ကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်း မည်သည့်မိတ်ဆွေ၏ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း၊ မီးဖွါးခြင်း ၊ မွေးနေ့ပွဲ စသည်သို့ ခေါ်မသွားရ။ (၃) မိမိအားပေးသောအသင်းကိုသာ အားပေးရမည်။ (၄) ပွဲစဉ်ကစားနေစဉ်အတွင်း စကားမပြောရ၊ အရေးကြီးကိစ္စပြောလိုပါက အားလပ်ချိန်/ပွဲပြီးဆုံးချိန်အထိစောင့်ပါ။ (၅) ပွဲစဉ်ဟိုက်လိုက်များသည် တစ်ပွဲလုံး၏အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သဖြင့် အခါအားလျော်စွာ မိမိကြည့်ရှုမည်။ (၆) ဇာတ်လမ်းတွဲများအား နေ့လည်ပိုင်း ပြန်လည်ပြသချိန်တွင်ကြည့်ရန်။ (၇) ပွဲချိန်အတွင်း တီဗွီရှေ့ မှ မဖြစ်မနေသွားလိုလျှင် ခေါင်းငုံ့သွားရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ တွားသွားပါ။ (၈) ပွဲချိန်အတွင်း “ဒါ မန်ယူနဲ့ ဂျာမနီကန်နေတာလား” စသည့် အရူးမေးခွန်းများ မမေးရ။ (၉) မိမိအားပေးသည့် အသင်းရှုံးနေချိန်တွင် ပြုံးမနေရ။ (၁၀)
ဦးကို ချစ်ရင် မင်းလုပ်ပေးစရာ ဆိုလို့ တခုပဲ ရှိတယ် … 👇😎
ဦးက မင်းလေး တွေ့ဖူးတဲ့ ကလေကချေနဲ့ အပေတေကောင်တွေလို မဟုတ်ပါဘူး။ smart ကျ တယ် ။gentlemen ဆန်တယ် ။ ပုဆိုးပဲ ဝတ်ဝတ် ၊ ဘောင်းဘီပဲ ဝတ်ဝတ် မင်း မျက်လုံးထဲမှာ ကြည့်ကောင်းနေစေရမယ် ။ ချောတာ မချောတာတွေ စိတ်မဝင်စားဘူး။ ခန့်ခန်း ညားညားကြီး ဖြစ်နေဖို့ လုံးဝ အာမခံတယ်။ ကလေးကလား ဆန်ဖူးတဲ့ အရွယ်တွေ ကျော်လွန်ခဲ့ ပီးပီ ။ အဲ့ဒီတော့ ဦးအသက်က အသက် ၃၀ အထက်မှာ ရှိနေတယ် ။ မင်း စိတ်ကြိုက် ဦး အပေါ် ဆိုးခွင့်ရှိတယ်။ မင်းရဲ့ ပတ်ချွဲ နပ်ချွဲလေးတွေ ကြားမှာ မင်း ဆိုးသမျှ က ဦးရဲ့
လင်မယား နှစ်ယောက် ညဘက် အိပ်ပျော်နေစဉ် အောက်ထပ် တံခါးကို တွန်းတိုက် ဖွင့်သံကြားလိုက်ရသည်။ အိပ်ရေးဆတ်တဲ့ မိန်းမဖြစ်သူက ရုတ်တရက် အလန့်တကြားဖြစ်ပြီး နိုးလာကာ ဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေသည့် သူ့ယောက်ျားကို အိပ်ချင်မူးတူး ကယောင်ကတန်းနှင့် ” သွား သွားတော့ မြန်မြန်ပြေးတော့.. ကျမ ယောက်ျား ပြန်လာပြီ ” ဟု အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ပြောလိုက်သည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်း အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လန့်ဖျန့်ပြီး ဘုမသိဘမသိနဲ့ သူနဲ့နီးရာ အိပ်ခန်း ပြတင်းပေါက်ကနေ ဝုန်းကနဲ ခုန်ဆင်း ပြေးလိုက်လေတော့၏ ။ တအောင့်လောက် ကြာပြီးနောက်… သူသည် တစ်ကိုယ်လုံး စုတ်တိစုတ်ပြတ် ဖုန်အလူးလူးနဲ့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကနေ ပြန်ဝင်လာရင်း မိန်းမကို ဒေါသတကြီး အော်ဟစ် အပြစ်တင် ပြောလိုက်သည် ။
ဘက်စ်ကားပေါ်က ကောင်မလေးနဲ့ လူပျိုကြီးတို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ကားပေါ်မှာ လူပျိုကြီးနဲ့ ကောင်မလေး အတူတူ ဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံး ၀င်းဝင်းလေကို မမြင် မြင်အောင်ပြတယ်… အဲဒီမှာ လူပျိုကြီးက အတင့် ရဲပြီး… ” နင့် စကပ်ကို အပေါ် နည်းနည်း တင်ပေးရင် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းပေးမယ်” ဆိုတော့… ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံ တခါတည်း တောင်းပြီး စကပ်ကို အပေါ်တင်ပေးတယ်… နောက် ညုတုတုနဲ့ ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက… ” ရှင် နောက်ထပ် တစ်သောင်းပေးရင်… ရှင်ကို ကလေးမွေးတဲ့ နေရာပြမယ် ” ” ဟာ”… လူပျိုကြီး တံတွေးသီးသွားတယ်။ ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းကိုလည်း… လျှောလျှောလျူလျူ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအခါ ကောင်မလေးက ကားရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းကို လက်ညိုးထိုး ပြလိုက်တယ်…
သမီး ၃ ယောက် မွေးထားတဲ့ အဒေါကြီးရဲ့ ဖြစ်ရပ်…။
ရွာတရွာမှာ သမီးတွေချည်း ၃ ယောက် မွေးထားတဲ့ အဒေါ်ကြီး တယောက် ရှိတယ် ။ အဲဒီ ရွာမှာပဲ မြို့ကနေ ရောက်လာတဲ့ အင်မတန်မှ အပြောကောင်းပြီး အလုပ် မလုပ်ပဲ လိမ်ညာ စားသောက်နေတဲ့ ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ လူရှုပ် တယောက်လည်း ရှိတယ် ။ အညာဒေသရဲ့ ဓလေ့စရိုက် အရ ရွာသူ ရွာသားတွေဟာ အင်မတန်လည်း ရိုးသားကြ ပါတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ အဒေါ်ကြီးရဲ့ သမီး အကြီးဆုံးဟာ လူရှုပ်နဲ့ ညားပါလေရော ။ ကိုလူလည်ကလည်း သူ့ထုံးစံ အတိုင်း ယောက်ခမ နဲ့ ခယ်မတွေကိုပါ အဆင်ပြေအောင် ပြောဆို စည်းရုံးပြီး တအိမ်လုံးရဲ့မေတ္တာကို ရအောင် ယူထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ တရက်မှာတော့ လူရှုပ်ရဲ့ဇနီးဟာ